Evergreen Love ( 2016 ) - Myanmar Asian TV
Evergreen Love ( 2016 )
Japan ကားလေးတွေတော်တော်ကြည့်ကောင်းတယ်နော် … အခု Evergreen Love ဆိုတဲ့ Movie လေးပါ …
အိမ်ထောင်အသစ်မှာ အသားကျနေတဲ့ အမေနဲ့ ခွဲပြီး တစ်ယောက်တည်းနေကာ ဘ၀ကို ပျင်းရိစွာနဲ့ ဖြတ်သန်းနေရင်း ကောင်လေးတစ်ယောက်နဲ့ မမျှော်လင့်ပဲ ၆ လ လောက် အတူနေဖို့ ဖြစ်လာတဲ့အခါ …
ကောင်လေးဂရုတစိုက် ပြင်ဆင်ပေးတဲ့ ထမင်းဗူးလေးတွေ … စက်ဘီးလေးနဲ့ အပင်ရှာ … ပန်းရှာထွက်ရင်း … ဘ၀မှာတစ်ခါမှ မရခဲ့ဖူးတဲ့ ပျော်ရွှင်မှုတွေ ရလာပြီးတဲ့နောက် …
ခွဲခွာရမှာကို တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ စိုးရွံ့လာတဲ့ ဆရာကာ …
ဟင်းအထူးအဆန်းလေးတွေ ချက်တတ်ပြီး … အပင်တွေကို အရမ်းချစ်ပေမယ့် ဘ၀အမှန်နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး လျှို့ဝှက်ချက်တွေနဲ့ ပြည့်နေတဲ့ကောင်လေး အစ်တ်စတီ …
Evergreen Love ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားနာမည်လေးအတိုင်း အပင်တွေအကြောင်း , ပန်းတွေအကြောင်း နဲ့ ထူးထူးဆန်းဆန်းဟင်းလျာလေးတွေကို မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပြီး ဖြူစင်တဲ့ အချစ်ကို ခံစားရမယ့် Romance ဇာတ်ကားလေး ဖြစ်ပါတယ် ….
Main Castsတွေအနေနဲ့ကတော့ ဆရာကာ (Mitsuki Takahata) နဲ့ အစ်တ်စကီ (Takanori Iwata) တို့က ပါဝင်ထားပါတယ် …
Translator : Myint Mo Zaw
Encoder : Sandar Lwin
Quality : Blu-ray 720p
File size : 572MB
Actors: Erika Yazawa, Hana Imai, Joji Abe, Kazuyuki Aijima, Mitsuki Takahata, Takanori Iwata, Toshiya Sakai
Soliddrive.co Myanmar 572 MB Download Openload.co Myanmar 572 MB Download
Forever Young ( 2015 )
2015မှာထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Chinese romanceကားလေးဖြစ်ပြီး… အဆို​တော်​မင်းသား Li Yifeng နဲ့ ​​မင်းသမီး Zhang Huiwenတို့ပါဝင်​သရုပ်​​ဆောင်​ထားတဲ့ ​​romance ဇာတ်​လမ်း​လေးပါ ဇာတ်​လမ်းပုံစံက​တော့ လူငယ်​​တွေရဲ့ အိပ်​မက်​​တွေနဲ့ ဖြူ စင်​တဲ့ချစ်​ခြင်း​မေတ္တာတရားကို ပုံ​ဖော်​ထားတဲ့ ဇာတ်​ကား​ကောင်း​လေးပါ ဇာတ်​လမ်းအကျဉ်း​လေးက​တော့ Gardenia band က main vocalist ဖြစ်​တဲ့ ရွှီ​​နော်​နဲ့ ဘဲ​လေးအကမယ်​ရန်ရှီးတို့က အိပ်​မက်​​တွေကို အ​ကောင်​အထည်​​…
Jinx!!! ( 2013 )
ဒီဇာတ်ကားလေးကတော့ 2013 ခုနှစ်မှာ ထွက်ရှိတဲ့ Japan ဇာတ်ကားလေးပါ … ဇာတ်အိမ်လေးကတော့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေးပါပဲ … လူငယ်ကြိုက် Drama / Romance ပုံစံ ဇာတ်လမ်းမျိုးလေးပါ … ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းလေးကတော့ – ဂျီဟို က ကိုရီးယား သူလေးတစ်ယောက်ပေါ့ … သူမ ချစ်သူ ထယ်ဝန်း နဲ့ သူ နဲ့က…
2010 ခုနှစ်မှာ ထွက်ရှိထားခဲ့တဲ့ လူငယ်ကြိုက် Romance , Comedy ဇာတ်ကားလေးပါ … အဓိကဇာတ်ဆောင်တွေ အဖြစ် ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်တော် ဦးဖြစ်တဲ့ Goblin ထဲက မှင်စာ Gong Yoo နှင့် Chicago Typewriter ဇာတ်လမ်းတွဲထဲက မင်းသမီး Im Soo-jung တို့က အတွဲညီညီနဲ့ ပါဝင် သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်…
ဒီဇာတ်လမ်းရဲ့အစက၁၅နှစ်အရွယ်သူငယ်ချင်း၎ယောက်ကနေစခဲ့တာပါ အဲ့ထဲကမှ ”ကန်န” ဆိုတဲ့ကောင်မလေးနဲ့ ”ဟာရုတ” လို့ခေါ်တဲ့ကောင်လေးကတော့ငယ်ငယ်တည်းကတစ်မြို့တည်းကြီးပြင်းလာကြတဲ့သူတွေပေါ့ ကျောင်းသွားကျောင်းပြန် အတူတူဖြစ်သလို အရမ်းလည်းသံယောဇဉ်ရှိကြတယ် အချိန်ကြာလာတာနဲ့သူတို့၂ယောက်သံယောဇဉ်ကသူငယ်ချင်းထက် ပိုနေပြီဆိုတာကိုလည်း၂ယောက်လုံးကစိတ်ထဲကနေ သိနေကြတယ် ”ကန်န” ဘက်က “ဟာရုတ” ဖွင့်ပြောလာဖို့မျှော်လင့်ခဲ့ပေမဲ့ “ဟာရုတ” ကတော့မပြောလာခဲ့ပါဘူး တနေ့တော့ သူတို့၎ယောက်ထဲက “ရာမာ” ဆိုတဲ့ကောင်လေးက “ကန်န” ကိုဖွင့်ပြောလာခဲ့တယ် အဲ့ဒီ့နေ့မှာပဲ “ဟာရုတ” ဟာ ကန်နဆီအသွား ကားအက်စီးဒင့်ဖြစ်ပြီး ဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်…
On Your Wedding Day ( 2018 )
2018ကမှထွက်ရှိထားတဲ့ Movieအသစ်လေးပါ ဒီဇာတ်ကားလေးကတော့ ကောင်လေးတစ်ယောက် သူ့ရဲ့ အထက်တန်းကျောင်းက အချစ်ဦးဆီက မင်္ဂလာဖိတ်စာ ရခဲ့တဲ့အကြောင်း အချစ်ဟာသ ဇာတ်မြူးကားလေးပေါ့ ပါဝင်သူတွေကတော့ D-Day , lookout, ခုလက်ရှိပြသနေတဲ့ room9ကားတွေနဲ့ နံမည်ကြီးနေတဲ့ မင်းသားချော kim young kwan နဲ့ မင်းသမီးကတော့ strong woman မှာ ဘုံဘုံ…
Ex-Files ( 2014 )
ကဲ ဆယ်ကျော်သက်တွေ ၊ အိမ်ထောင်ရှင် မမ ၊ ကိုကိုတွေ ကြည့်သင့်ကြည့်ထိုက်တဲ့ ကားကောင်းလေးတစ်ကားနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ် … ကားလေးနာမည်က Ex-files ပါ … ဒီကားက 123 ဆိုပြီး ၃ ကား ထွက်ရှိထားပါတယ် … Ex-Files 1 ( 2014 ) မှာ…
Cheese in the Trap ( 2018 )
အိုဂုံပြီးတော့ ဆမ်းဂျန်းရုပ်ရှင်ကားသစ်လေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေနော်…. Cheese in the trap ဆိုတာနဲ့ 2016တုန်းက tvN ရုပ်သံလိုင်းကထုတ်လွှင့်ခဲ့ဖူးတဲ့ mini series လေးကို အတော်များများကြည့်ဖူးကြမှာပါနော်….. ခုကတော့ “Cheese in the Trap” ဆိုတဲ့ korean webtoonလေးကိုပြန်ရိုက်ထားတဲ့ရုပ်ရှင်ဇာကားလေးပါ….. ဒီဇာတ်ကားလေးကို14.3.2018မှာရုံတင်ပြသခဲ့တာဖြစ်ပြီးIMDb 7.3/10 ,Asian Wiki မှာ user rating…
Trailer: Evergreen Love ( 2016 )